နေးဗစ် Trust မှ - အင်အားအကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း Tools များတစ်ခုမှာ
ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်းများအတွက်နေးဗစ် Trust မှတရားစွဲဆိုမှုကနေ
အတော်များများကပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကျွမ်းကျင်သူများအပြင်းထန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကိုး စား. တစ်ဦးနေးဗစ်၏ကာရစ်ဘီယံကျွန်းအတွင်းနိုင်ငံတကာယုံကြည်မှုကိုကြောင်းသဘောတူသည်။ နေးဗစ်ဖလော်ရီဒါ၏အရှေ့တောင်တည်ရှိသည်။ ဒါဟာအလွန်အားကောင်းတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိစ္စတွင်ဥပဒသမိုင်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာသီအိုရီဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ပေးထားပြီးစမ်းသပ်ပြီးမြင်ကြပြီတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်မဟုတ်ပါဘူး။
ငါ 1991 ကတည်းကပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ 1906 အတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ငါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စအတွက် 65,000 clients များကျော်ရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာစာသားကိုး စား. နှင့်ကုမ္ပဏီများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထူထောင်ခဲ့ကြယုံကြည်ပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောသူတို့၏ရှေ့နေများနှင့် CPAs အဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကဲ့သို့သောအခြားကုမ္ပဏီများမှနှီးနှောဖလှယ်ပွဲသင်ပေး။
ဟုတ်ပါတယ်, ပြည်တွင်းကိုးစားရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ကအမှုကိုလေ့လာပါလျှင် ပညတ်တရားကို နှင့်ဥပဒေရေးရာတာဝန်ယူမှုများတိုးမြှင့်သီအိုရီ ... သငျသညျမြားစှာအကြိုးရလဒျ-oriented တရားသူကြီးတွေကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ပြည်တွင်းသူတွေကိုပြုသောအမှုရှိရာကနိုင်ငံတကာယုံကြည်မှုကိုအလုပ်လုပ်တယ်အကြောင်းပြချက်ဒေသခံတရားရုံး "ငါ့ကိုပိုက်ဆံပေးပါ။ " ဟုဆိုကြောင်းကိုသင်၏ဒေသခံတရားရုံးများလုပ်ပေးအဖြစ်ဒေသခံတရားရုံး၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏အပြင်ဘက်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေးဗစ်ကျွန်းဥပဒေအခိုင်အမာဖြစ်သောအဆိုပါဂေါပက ... လိုက်လျောမည်မဟုတ်ဖြစ်ပါသည် နေးဗစ်အတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်။
နေးဗစ် Trust မှအကျိုးကျေးဇူးများ
1 ။ တစ်ဦးကကြွေးရှင်တစ်ဦးကနိုင်ငံတကာယုံကြည်မှုကိုဆန့်ကျင်ဥပဒေရေးရာအရေးယူဆောင်ခဲ့ခြင်းမပြုမီနေးဗစ်အစိုးရနဲ့ $ 100,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာနှောင်ကြိုး post ရပါမယ်ပညတ္တိကျမ်း 2015 ဖတ်မည်သို့မည်ပုံဖြစ်ခဲ့သည်။ 2018 မှာ, ပင်ပိုကောင်းတယ်။ အဆိုပါနေးဗစ်တရားရုံးများယခု $ 100,00 န့်သတ်ချက်ထက်ပင်ပိုမိုမြင့်မားသည့်နှောင်ကြိုးသတ်မှတ်နိုင်သည်။ (အချို့အခါသမယတွင်သူတို့အဖြစ်ကောင်းစွာနိမ့်နှောင်ကြိုးသတ်မှတ်နိုင်သည်။ )
2 ။ အများဆုံးနိုင်ငံများနှင့်မတူဘဲတစ်နေးဗစ်ယုံကြည်မှုအသတ်မရှိကြာရှည်နိုင်ပါတယ်။
3 ။ နေးဗစ်နိုင်ငံခြားတရားစီရင်ပိုင်အသိအမှတျမထားဘူး။ (တကယ်တော့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုဆက်ကပ်သောအနည်းငယ်နိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုပါပဲ။ )
4 ။ တရားတို့ကိုသင်တဦးတည်းထဲသို့နှစ်ခုယုံကြည်မှုပေါင်းစပ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုသို့တဦးတည်းယုံကြည်မှုကိုခွဲဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
5 ။ ဒါမှမဟုတ်တရားစွဲဆိုမှုတွေဖြစ်တဲ့ကားချုံးချုံးကျသွားတယ်အဖြစ်ပထမနေရာ ... အတွက်တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ရတဲ့အကြောင်းရင်း - တစ်ကြွေးရှင်ကိုသူတို့အရေးယူများ၏အကြောင်းရင်း၏တစ်နှစ်အတွင်းဒါလုပျဆောငျရမညျတစ်ဦးလိမ်လည်လှည်လွှဲပြောင်းအရေးယူဆောင်တတ်၏ပါ။ နေးဗစ်တရားရုံးများကိုပင်အမှုမကြားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ယုံကြည်မှုကိုကို set up နှင့်နာရီ ticking ရဖို့သင့်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအတွက်ပါပဲ။
6 ။ တစ်ကြွေးရှင်လျင်မြန်စွာဖိုင်များကိုအလွန်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ရပ်မှာတော့သူတို့တစ်တွေ $ 100,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာနှောင်ကြိုး post နှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သံသယကျော်လွန်နှင့် Settlor ကြောင်းအထူးသဖြင့်မြီရှင်များထံမှပိုက်ဆံစောင့်ရှောက်ဖို့ယုံကြည်မှုထူထောင်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူသူတို့၏အမှုသက်သေပြရပါလိမ့်မယ်။ ဒါက Settlor စသည်တို့ကိုထိုကဲ့သို့သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးမျိုးအဖြစ်အခြားမည်သည့်အကြောင်းပြချက်, အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, များအတွက်ယုံကြည်မှုထူထောင်လျှင်, မနိုင်မယ့်ကြွေးရှင်အဘို့အလွန်ခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ ထို့အပြင်ကြွေးရှင်ကတော့ $ 100,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာနှောင်ကြိုးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်အန္တရာယ်များ။
ကအလုပ်လုပ်မည်သို့ - ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း Trust မှ
အခုတော့ယုံကြည်မှုဥပဒသီအိုရီ "ဟုကိုကိုက်သောဖိနပ်ထဲသို့ခြေလှမ်း" ကိုအသုံးပြုသည်။ ယင်းမြီစားကိုတိုက်ရိုက်လုပ်နိုင်သမျှကို, ထိုကြွေးရှင်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ဖိနပ်ထဲသို့ခြေလှမ်းနှင့်တူညီသောအရာလုပျနိုငျသညျ။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိကြေးစားမူကြမ်းသောနေးဗစ်ယုံကြည်မှုနှင့်သငျသညျထိုကဲ့သို့သောကျွန်တော်တို့ရဲ့နေးဗစ်ဥပဒေကုမ္ပဏီတခုအဖြစ်လိုင်စင်ရဂေါပကရှိသည်သောအရေးပါသည်အဘယ်ကြောင့်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ Trust မှအတွင်းပိုင်း LLC
ကျွန်တော်တစ်ဦးယုံကြည်မှုထူထောင်တဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များသည်ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုပေးချင်တယ်။ ဒီတော့ယုံကြည်မှုကိုတစ်ဦးနေးဗစ် LLC ၏ 100% ကိုပိုင်ဆိုင်နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့မန်နေဂျာပါစေ။ အခုတော့ client ကို LLC သည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းရှိသမျှအကောင့်အပေါ်ကနဦးလက်မှတ်ရေးထိုးသော LLC ၏မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့က "မကောင်းတဲ့အရာ" ဖြစ်ပျက်အခါ, သငျသညျယာယီငါတို့တရားမြဲမြံစွာဂေါပက LLC သည်၏မန်နေဂျာအဖြစ်အဆင့်ရှိနိုင်ပါသည်။ ယခုဂေါပကကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုင်စင်နှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ Plus အားသူတို့တစ်တွေဂေါပကလိုင်စင်ရရှိရန်အထူးကြပ်မတ်နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများရှောက်သွားလေ၏။ ကပ်လျက်တည်ရှိခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့ကရန်ပုံငွေအာမခံထားသည်ဟုဆိုလို။
ဒါကြောင့် Client ကိုလုံခြုံမှုနှင့်စိတ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအတွက်ခြေလှမ်းတစ်ခုတည်းသောအချိန်တရားရုံးငွေကိုယူလိုကျသောအခါဖြစ်ပါတယ်။
ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း Trust မှအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
ဒီတော့မေးသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုကိုယ်ငွေယူပြီးတရားရုံးတစ် 100% အခွင့်အလမ်း, သငျသညျအစားအဘယ်အရာရှိသည်မယ်လို့ "ပါသလဲ သို့မဟုတ်သင်မဟုတ်ဘဲတစ်ဦးကို client ရဲ့ပိုက်ဆံယူတော့မှခဲ့သူတစ်ဦးလိုင်စင်, ကပ်လျက်တည်ရှိဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ, ရှိသည်မယ်လို့, သင်ပြုသူတို့ကိုပေးဆောင်ကြဘာလုပ် ... သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံ .protect? "
က "မကောင်းတဲ့အရာ" ဝေးသွားသည့်အခါထိန်းချုပ်မှု၏ string ကို - ယုံကြည်မှု၏အတွင်းပိုင်း LLC သည်၏စီမံခန့်ခွဲမှု - သင်ပြန်တတ်နှင့်သင် In-အလိမ္မာသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံရှိသမျှနှင့်အတူပြန်ကားမောင်းသူရဲ့ထိုင်ခုံ၌ရှိကြ၏။
သငျသညျဥပဒေကြမ်းများရှိပါကထိုအတောအတွင်းမှာတော့ဥပဒေရေးရာ duress စဉ်အတွင်းသည်, ဂေါပကသင်တို့အဘို့ထိုသူတို့ပေးဆောင်နိုင်ပါ။ သင်နေတုန်းပဲကိုယ်ငွေသုံးခွင့်ရှိသည်ဒါနဲ့ဂေါပကသင်တို့အဘို့ပိုက်ဆံထောက်ပံ့ပေးသူတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချမိတ်ဆွေသို့မဟုတ်ဆွေမျိုး, etc ပေးဆောင်ရှိနိုင်ပါသည် ... ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ရန်သူ-မှာ-တရားကိုမပါဘူး။
အောက်ခြေလိုင်းသင်တို့အဘို့ဤမျှခက်ခဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အရာအားလုံးလုံခြုံပြီးလုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်မှုကိုပေးစွမ်းသည်အကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုကမ်းလွန်ကျင်းပအရည်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအဘို့ဖြစ်၏။ အမေရိကန်တရားရုံးများကအမေရိကန်ဘဏ်အကောင့်များနှင့်အိမ်ခြံမြေကျော်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်အိမ်ခြံမြေအဘို့ကျနော်တို့ရှယ်ယာ Strip ဟုခေါ်သောအရာကိုလုပ်ပါ။ ကျနော်တို့ LLC မှပေးဆောင်ရမည့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဆန့်ကျင်ပေါင်မှတ်တမ်းတင်။ ထို့နောက်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ကတတိယပါတီသူတို့အားပေါင်ဝယ်ယူရန်နှင့်သင့်အတွက်လက်လှမ်းမမှီအကောင့်ထဲသို့ရရှိသောနေရာပါပြီ ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှု။
ကျနော်တို့ရှေ့နေများဤယုံကြည်မှုအများကြီးတက်ထားကြ၏။ ထိုအခါရှေ့နေများ $ 30,000 မှအကြား $ 50,000 ကောက်ခံ။ တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပမာဏ၏တစ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်သည်။ အထက်ပါနံပါတ်တဦးတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါသို့မဟုတ်ဤစာမျက်နှာပေါ်မှာငါတို့အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပုံစံဖြည့်စွက်ပေးပါ။